“စက်တွေက လူတွေလို တွေးလာမှာကို မပူပါဘူး။ လူတွေက စက်တွေလို တွေးလာမှာကိုပဲ တွေးပူတယ်” ဆိုတဲ့ Apple CEO Tim Cook
visibility 1840 Views
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က တရုတ်နိုင်ငံက Cybersecurity Administration မှ တာဝန်ရှိသူတွေ ဦးစီးကျင်းပခဲ့တဲ့ စတုထ္ထအကြိမ်မြောက် WIC (World Internet Conference) မှာ Apple CEO Tim Cook အနေနဲ့ Keynote တစ်ခု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Keynote ထဲမှာကတော့ Privacy နဲ့ Security အကြောင်းတွေကို အဓိကထားပြီး ပြောကြားသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
“ဒီ Conference ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး အကျိုးအမြတ်တွေကိုလည်း ညီတူမျှတူ ခွဲယူနိုင်မယ့် Digital Economy တစ်ခုကို တည်ဆောက်ကြဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် Apple ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ထပ်တူညီမျှပါပဲ။ Apple အနေနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံက လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အတူ လက်တွဲပြီး အနာဂါတ် Cyberspace Community တစ်ခု တည်ဆောက်သွားရမှာကိုလည်း ဂုဏ်ယူမိပါတယ်”
ဆက်လက်ပြီး Apple အနေနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံက လူဦးရေ ၅ သန်းကို အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ပေးထားပြီး ဖြစ်သလို အဲ့ဒီ ၅ သန်းထဲက ၁.၈ သန်းဟာ App Store မှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ App Developer တွေ ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်း ကြွားဝါသွားပါတယ်။
Digital ခေတ်ကို ရောက်ရှိလာတာနဲ့ အမျှ လူသားဆန်တဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ ရှိကြဖို့ လိုအပ်တယ် ဆိုတာကိုလည်း
“AI နဲ့ ပက်သက်ပြီး မကောင်းတာတွေပဲ​ ပြောနေကြတာ များတယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျနော်ကတော့ စက်တွေက လူတွေလို တွေးလာမှာကို မပူပါဘူး။ လူတွေက စက်တွေကို တွေးလာမှာကိုပဲ တွေးပူတယ်ဗျ။ လူသားတွေအားလုံး လက်တွဲပြီး နည်းပညာကို လူသားတွေရဲ့ တန်ဖိုးတွေ၊ လူသားဆန်မှုတွေကို စက်တွေနဲ့အတူ ပူးပေါင်းပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။​ ဒီနေရာမှာ ထပ်ပြောဖို့လိုတာက အနာဂါတ် နည်းပညာလောကဟာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေ၊ တီထွင်ကြံဆမှုတွေရှိဖို့ အရေးကြီးသလို တစ်ဖက်မှာလည်း အသုံးပြုသူတွေရဲ့ Privacy ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် Safeguards တွေရှိဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်”
လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ AI တွေက လူတွေလို စဉ်းစားတတ်လာမှာကို တွေးကြောက်နေတဲ့ Elon Musk ရဲ့အမြင်နဲ့ Tim Cook ရဲ့အမြင်ကတော့ ဆီနဲ့ရေ ဖြစ်သွားပါပြီ။
Privacy နဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို ဦးစားပေး ပြောနေတယ် ဆိုပေမယ့် တစ်ဖက်မှာတော့ Apple အနေနဲ့ ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့် Microsoft ရဲ့ Skype နဲ့ အခြား VPN Apps များစွာကို China App Store ထဲကနေ ဖယ်ရှားပေးခဲ့ရတာမျိုးတွေ ရှိခဲ့ဖူးတာဆိုတော့ တစ်ချို့ကတော့ Tim Cook ကို အမြင်သိပ် မကြည်ကြပါဘူး။
ဒါပေမယ့် Apple အနေနဲ့ တရုတ်အစိုးရကို ကလန်ကဆန် လုပ်ခဲ့မယ် ဆိုရင်လည်း Apple ရဲ့ တတိယမြောက် အကြီးဆုံး Market တစ်ခုကို ဆုံးရုံးရမှာဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဒေါ်လာ ဘီလီယံနဲ့ချီပြီး ဆုံးရှုံးရနိုင်ပါတယ်။ Tim Cook အနေနဲ့ Keynote ထဲမှာ ကြွားဝါခဲ့တဲ့ ဦးရေ ၁.၈ သန်းရှိတဲ့ App Developer တွေဟာ App Store ကနေပြီးတော့ နှစ်စဉ် ၁၆.၉၃ ဘီလီယံဒေါ်လာလောက်ရှိတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေ ပေးနေတာ ဆိုတော့လည်း Apple အနေနဲ့ တရုတ် Market ကို လက်လွှတ်ဖို့က ဖြစ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Tim Cook အနေနဲ့ အခုလိုမျိုး တရုတ်နိုင်ငံ Conference တွေမှာ Keynote တွေ ပြောကြားနေတာဟာ Apple အတွက်တော့ အရေးကြီးတဲ့ အချက်ပဲလို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဆိုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Privacy အပြင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရမယ့် Tim Cook ရဲ့ နည်းပညာ အနာဂါတ်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံမှာ တကယ်ဖြစ်လာမလား? စက်တွေက လူတွေလို တွေးလာမှာကိုရော တွေးမပူရတော့ဘူးလား? ဆိုတာတွေကတော့ စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပါပဲ။
Artificial Intelligence Tim Cook Elon Musk Cyber Security Cyber Laws User Privacy Keynote Apple World Internet Conference Cyberspace Community